'UPapa oMncinci' Recap, Isiqendu 7: Peter Pope Complex | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'UPapa oMncinci' Recap, Isiqendu 7: Peter Pope Complex
'UPapa oMncinci' Recap, Isiqendu 7: Peter Pope Complex
UJude Law njengoLenny Belardo kunye noScott Shepherd njengoKhadinali Dussolier.IGianni Fiorito / HBO
UVinnie: U-Krestu oyingcwele onwabileyo ubuyele eMhlabeni, waDrew, apho uza kuqala khona UPapa oselula ’ Isahluko sesixhenxe? Esi siqendu besisoyikeka, sinobundlobongela kwaye ngamanye amaxesha super ayimnandanga into yokuba noPope Pius XIII kuye kwafuneka ukuba amphazamise emva kwemini ngePower Stroll edlula eVatican ejonge ngaphandle esikrinini kwaye- esekwe kwezo thunzi zimnandi-ngqo elangeni:
Ndicinga ukuba licebo elilungileyo ukuqala ngoAndrew Dussolier owathi, njengoko kuvela, wakha ubumnandi bakhe bokugqibela kwiveki ephelileyo kwaye wagqiba esi siqendu sifile ecaleni kwendlela yaseHonduran. Ndicinga ukuba uyakubakhona ade uPedro Pascal afumanise isidumbu sakhe kwaye enze konke okuthandana naye, okanye nokuba yintoni INarcos imalunga ne.
Drew : Hmm, sukucinga ukuba inkwenkwe yethu ifile. Ndijonge iifreyimu kuloo ndawo yokugqibela izihlandlo ezimbalwa, kwaye ngokuqinisekileyo uyabaniza kwaye uyaphefumla. Kwaye awudubuli umntu kwi-side-gut kuba iyabulala, uyenza kuba ibuhlungu kakhulu kwaye kukufa kwe-slooooooow ukuphuma kwegazi. (Ndiyazi njani le nto? Ndiyazi njani into, Vinnie. UThixo wandixelela ephupheni.)
UVinnie : Phambi kokuba uAndrew agqibe abuyele eHondura ebulawa nguDos Equis oyena Mntu unomdla eMhlabeni, uxakekile unexesha elibi UKUKHADinali kwisiXeko saseVatican. Apha, zidweliswe ngokulandelelana, yiyo yonke into embi eyenzeka ku-Andrew okoko wathabatha umsebenzi kaLenny:
1) Indawo ye-Orgy kwisiXeko saseVatican ibuthathaka i-AF.
2) U-Lenny wanyanzela umhlobo wakhe wobuntwana ukuba aphume abefundisi abathandanayo besebenzisa oonongogo abangamadoda
3) Umbingeleli oselula wazibulala esidlangalaleni ngenxa yesikimu esichazwe ngaphambili sobunongogo.
I-3) Incoko yeqela lamaRoma ijolise ekufeni kwenkcubeko ye-cocktail, kwaye hayi ukubila kathathu.
4) Ubalo u-Emma Meraviglia AKAYEKE ukuzama ukulala naye.
5) Unyana ka-Countess Emma Meraviglia AKAYEKE ayeke ukuzama ukulala naye, kodwa ngendlela ephazamisayo. Ngokukrakra, loo ndawo yayiyenye yezo zinto uzibona zisiza – ukuba uPaolo Sorrentino warhuqa ngaphandle kwe-sloooowly- kodwa iyothusa, hayi eyona incinci inento yokwenza noku kwenzeka kwimoto emileyo enesithunzi ngelixa umbane ubaneka kude.
Drew : Kwaye apho siya khona, akunjalo? Nangona uLenny ekucingelwa ukuba ungcwele wasemhlabeni apha, ngenene nguAndrew ohamba kuzo zonke iimvavanyo esizidibanisa nezono zokufa… okanye nantoni na. (Kwakhona, ndingumJuda, ke isiqingatha salo mboniso sisiGrike kum. Okanye… isiLatin? Ndicinga ukuba sisiLatin kum.) Ukuba uLenny umele amalungisa, anobundlobongela, enza imimangaliso ngeendlela eziyimfihlakalo uThixo womnqophiso omdala – Heeb Bible, ukuba uya- kunoAndrew kukuzeka kade umsindo, uKristu emnqamlezweni. Ufela izono zethu ngoku , ngaphandle ezilalini, kunye noNary Virgin uMariya izimvu ukumthuthuzela. Kwaye, uAndrew wonile, kwaye izono zakhe zithatha uhlobo lomfanekiso wombingeleli ombi: uye walala namadoda kunye nabasetyhini (ngaxeshanye!); unxilile; ukuthanda kwakhe kubuthathaka kwaye uhleli ngelixa uLenny eqhuba iCawa yamaKatolika kwi-Vatican kuba nje engenako ukuxelela inkedama yakhe ukuba idibanise i-Peter Pope-Pan.
Ewe, loo ndawo wayenaye emotweni yayinoburhalarhume, ngakumbi kuba, ngaphandle kokusilela kwakhe njengendoda yelaphu, u-Andrew ubonakala ngathi uvela kwindawo yothando nokunyamezelana. Ungukukhanya kubumnyama bukaLenny, kwaye ukuba NGOKWENENE ufile? UThixo asisindise sonke kwingqumbo kaPopu Pius the Gonna Fuck You Up.
UVinnie Nokuba yeyiphi na indlela, uAndrew wenza isigqibo, kwaye wabuyela eHonduras efihliwe njengoNerdy Outcast ofumana ukuzixabisa kwakhe ekupheleni kwimovie kaJohn Hughes.
: Hmmm, bendiza kuhamba naye Umalume kaFreddie Miles okhathazekileyo okanye i-pedo enkulu, kodwa wachaza indlela amaBritane athi ngayo, ' peeee-yenza . ’Kodwa eyakho iyasebenza.
UVinnie: Okwangoku, esi siqendu sidlala ngokwenene ngombono wokuba UPapa oMncinci ngokwenyani Upopu wosana olusizi kakhulu kwaye akakaze aqhubele phambili ngenene kwinqanaba lokufuna ukuba abazali bakhe baphume baphume phantsi kweMfumba yoMzimba waBantwana kwaye bamthande kwakhona. UDade Mary, othe ngandlela thile akazange afunde ukuqhuba ibhola yomnyazi kwiminyaka engama-30, usebenzisa ngokupheleleyo oku. Ngokuqinisekileyo, usathembekile kakhulu kuLenny, kodwa uyazi ukuba abefundisi bayazilahla kwiinqaba kwaye indawo ye-LGBTQ ikulungele ukuqhankqalaza iindonga zaseVatican njengemilita yembali elunge kakhulu. Ke, ukuthatha uLenny kumdlalo wakhe, ulungiselela iskimu esicacileyo sokumenza acinge ukuba abazali bakhe bayabuya ekhaya.
Drew : Kwaye, ngendlela? Elo cebo alisebenzi kuphela kuba ulithathile TOO FAR. Ukuba uye wema ekuthumeleni i-imeyile ka-Lenny eyothusayo yokumgcina ephazanyiswa yingcinga yabazali bakhe abadlala Ndiyayazi into oyenzileyo ngehlobo elidlulileyo, kwaye ibingummangaliso, akunjalo? Umdlalo wekati kunye nempuku, uViollelo kunye noDade uMary ngebabemgcine uLenny phantsi kolawulo… ngokungapheliyo?
UVinnie : Iqala ngoDade uMary ebuyisa iqhekeza lombhobho katata kaLenny, uLenny asabela njengoJulia Roberts evula ibhokisi yering Ibhinqa elihle :
Izinto zibaxeke kancinci xa, mhlawumbi ndiyithandayo UPapa omncinci Indawo ukusukela kwinkulumbuso, uDade uMary uqesha abadlali ababini ukuba babonise abazali bakaLenny. U-Jude Law ugijimela kwiimvakalelo ezili-12 ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni, ukusuka kwimincili enjengomntwana ngo-Eva weKrisimesi, ukuya ekuqalekeni kokudana okucocekileyo, okucekisekayo ebusweni babadlali, ku-Owu Thixo wam uyabajoja njengenja ?
Khupha aba bakhohlisi ekhayeni lam kwangoko, utshilo uLenny, ecenga umbuzo wokuba mangaphi amaxhegokazi uLenny Belardo afunxayo ukusukela ebuntwaneni ukuba aqiniseke ukuba ayingomama wakhe.
Drew : Ewe, ke udade uMariya wayenza enye. Bayabulala. Impazamo. * Utya ikapa * Uye wajongela phantsi (okanye mhlawumbi akazange afunde, kuba khumbula, uLenny uvele nje wachaza olu lwazi kwisibhedlele sikaEstere) amandla kaPopu wokukhumbula ukuba abazali bakhe babenjani. Ndiyathetha, ngendisengozini nje yokuqikelela nge-patchouli kunye nokhula, kodwa uDade uMary uthathe ukungcakaza kwelinye icala, eqesha abadlali ababini abakhangeleka ngathi babekwinkqubo yolwaphulo-mthetho yaseBritane eqinisekileyo ukuba badlale abazali bakaLenny bangaphambili behippie.
Yabona, ukuba bendiphethe le stunt, ngendithathe ulwazi lwam olusebenzayo lwendlela abazali abanenkcubeko yokuguga ngokubenza bafike ngokwahlukeneyo, bengavumi ukudibana ngamehlo ngaphambi kokuba bathethe noPopu njengokuba omnye umzali wayengekho kwigumbi.
Uyazi, utata wakho akazange asebenzise loo mbhobho…
Ewe umama wakho angatsho, unesifo sengqondo.
Sithandwa, ufuna ukuya kuthenga eRoma? Singakuthengela itracksuit entsha kwaye ndingakuxelela ngayo yonke imicimbi awayenayo utata wakho ngexa wawusancancisa.
UYESU KRISTU RACHEL!
Owu, kwaye unje, bobabini abazali NGOKUQINISEKILEYO bebeza kuzisa abanye babo abalulekileyo kunye ne-plethora yabantu abadala abaza kubazala. Lenny, dibana nomntakwenu uDavid. Waphumelela kwi-FIT ngesidanga kuyilo lwempahla, kwaye u… Kulungile, uyangena ngoku e-Buzzfeed, kodwa ukuthanda kwakhe OKWENENE ngumdaniso.
Kuyabonakala, yiyo loo nto Unyana unyoko kwakufuneka umgcine.
U-GODDAMNIT, UYOSEFU. NDICINGA UKUBA SIYA KUGCINA LONTO LWAKHONA.
UVinnie: Okwangoku , iyelenqe lePriest Squad libuyile! I-Voiello, i-tbh ingathanda ukubukela ibhola ekhatywayo kwijezi yayo enomdla, inekopi yogcino yeefoto zikaLenny / Esther, kwaye ikulungele ngokupheleleyo ukuqala i-Boobgate 2017. Ngapha koko, iya kuhamba phambili: UVoonello ufuna ukugcizelela ukuba U-Lenny ngutata wosana luka-Esther, olunokuthi luchaze ubuncinci ukuba kutheni ezame ukuluhlaba emhlabeni kwiveki ephelileyo njengebhola ekhatywayo. Kwiintsuku ezili-15 siyakuba noPapa omtsha, uVooello uxelela uKhadinali Caltanissetta. Umntu omdala.
Drew : Ugh, ewe. Kukhulu ngokutshintsha kwe-Voiello malunga noLenny. Nje ukuba imole enkulu inamathele kubuso bendoda kwaye ilawule ingqondo yayo ngetekhnoloji yelinye ilizwe, ihlala iyimilogo enkulu eqhotyoshelwe ebusweni bendoda kwaye ilawula nengqondo yayo kusetyenziswa itekhnoloji yelinye ilizwe. Ndilungile?
UVinnie : Kodwa ngubani? Ayinakuba yiCaltanissetta, kuba iCaltanissetta indala kuneSistine Chapel kwaye inokuthi ife ngokubeka umnqwazi. Kuyinyani ngokwenene ukuba ngalo lonke ixesha singena eCaltanissetta, ujonge kufutshane nokufa. Kwisiqendu sesi-8 uza kudityaniswa nemiphunga yentsimbi, kwaye ekugqibeleni uza kuvela kwigumbi le-cryo enxibe isuti epheleleyo yeDarth Vader. (Voiello uza kuba njengoPius usenguPopu noCaltanissetta uza kuba njalo Noooooooooo )
I-Voiello ihamba nokhetho olusengqiqweni, uKhadinali Spencer, okhokelela kwisimo esithandekayo nesibuhlungu somphefumlo ngokukhawuleza konke: USpencer, esenza idilesi yakhe yokuqala yePapa phambi kwesipili njengemigca ebalekayo Phambi komboniso wetalente enkulu.
Drew : Ndiwuthandile umboniso apho ukuphefumla ngomatshini kukwenza UCINGA ukuba uVoelloello noSpencer bakwigumbi elinoGirolamo, inkwenkwe eneemfuno ezizodwa ezixhonywe kwindawo kaVooello ngendlela yeplato, engenaburhalarhume; kodwa ke iimbumbulu zokudubula zibonisa ukuba ngenene yiKhadinali Caltanissetta enesigqumathelo sokuphefumla esisigxina. (Mfondini, iCaltanissetta yindlela engaphezulu kweValpatine kuneVader. ULenny uyiVader iyonke. Yiza.)
UVinnie: Enye ye UPapa oMncinci Eyona mimangaliso mikhulu yindlela enokuthi ithathe ixesha elide, izingxoxo ezimileyo kwaye uzijike zibe ngumdlalo opheleleyo, kufuneka-ubone. Umzekelo: Intlanganiso kaLenny noAndrew eluphahleni, ngumgangatho wakho lowo kwenzeke ntoni kuwe ndoda Thetha phakathi kwabahlobo bakudala ngaphandle kwesiphelo sonke seCawa eNgcwele yamaKatolika exhonywe kwimali eseleyo. Uzakukhula nini? UAndrew ubuza esithi, ucinga ntoni ngehlabathi.
Akunakuze, uLenny uyaphendula. Umbingeleli akaze akhule kuba engenakuze abe ngutata. Uya kuhlala engunyana. Kungenxa yoko le nto sabeka isifungo sokungatshati kwiinkulungwane ezili-13 ezidlulileyo.
OO, NGABA kutheni? khwaza zonke izizukulwana zababingeleli, abathi bonke ngokucacileyo babe netarpal tunnel ezihlahleni zabo.
UVinnie: Okwam ndiyithandayo, Nangona kunjalo, kukuma kwetafile yesidlo sangokuhlwa phakathi kukaLenny noVooiello, apho uLenny atshintsha ngokungacacanga iipleyiti kunye noVooello kuba esoyika ukuba netyhefu, phakathi kwezinye izinto. Umthetho mkhulu, njengoko ebelixesha lonke le-dang, kodwa ngowuphi umsebenzi ovela ku-Angelo Silvio, etsala imiboniso bhanyabhanya engaphantsi IArmagedon iMeteor enamathele esidleleni. Zizinto ezincinci, nazo; Voiello uphawula ukuba iindlela zakhe zingaphezulu kwetyhefu elula, kwaye uLenny uphendula kufuneka ndikunike loo nto. Inkangeleko yobuso bukaVooello ayixabisekanga. Nje, ngathi, ekhwaza ukuba uthixo ulungile.
Drew : Yima, bendicinga ukuba loo layini ibingabazali bakaLenny bobuxoki? Kwaye iVooello ifana ne-LOL, olo hlobo lwe-chicanery ayisiyiyo isitokhwe sam. Kodwa masingakulibali ukuba ngubani unobangela wale ngxaki: UTata uTomasso, ogulayo kukuva malunga nendlela uThixo ahamba ngayo kwiincinci ezincinci azifumana kwiCraigslist yaseZulwini. NguTomasso ohamba esasaza amarhe okuba uLenny akakholelwa kuThixo. Yeyiphi… a) indlela yokungakwazi ukuthatha isiqhulo, mfo; b) indlela yokuchitha iinyanga ezilithoba uhleli kwibhombu athe lo mfana ukuxelele ngaphambi kwekhaya lakhe lokuqala kwaye c) ayinangqondo kwaphela. Ukuba kukho into enye uLenny ayenzayo, uhlobo, akholelwa kuyo (ngaphandle kwakhe), nguThixo. Kulungile, mhlawumbi inguqulelo kaLenny kaThixo ikho ngokufana notatomkhulu ongumakhulu, luhlobo nje lokubonisa kwaye ikunike izipho kodwa ingabi kukukhumbula igama lakho okanye nantoni na, kodwa ewe, uLenny ngokuqinisekileyo ukholo . Ngaphandle koko, inokuba yintoni isiphelo somdlalo apha? Yabona, uLenny akazami ukwenza amandla ngenxa yamandla nje, kananjalo akazami kuthandwa, okanye nokuba nempembelelo. Uzama ukhula ingqolowa kumququ, aze ahlule amakholwa okwenyani kubaqhekeki abathe batshintsha iibhayibhile kwiCawa yamaKatolika ukuze bakhuphe iikopi zesibini Sikhululekile ukuba nguwe kunye nam .
Injongo yakhe KUPHELA – ngaphandle nje kokwenza umama notata babe neqhayiya lokuba ndiyeke ukuba ngupopu ndize ndihoye ezinye iintsana- kukucofa ijusi kaThixo awayenayo xa wayesengumntwana (emva koko, ngelixesha, Ukuphola ngeeKhadinali eziPhezulu kunye noEstere eL lawn). Mhlawumbi uLenny ukholelwa kuphela kuThixo njengesixhobo; amandla okwenyani nxamnye neentshaba zakhe kunye nokwenza imimangaliso kubahlobo bakhe. (Isikweko sikaVader sisebenza apha ngokunjalo.) Okanye mhlawumbi uyakholelwa ukuba uThixo ngutata wakhe oyihippie, emlinde esibhakabhakeni. Kodwa ngokuqinisekileyo ukholelwa kwinto ethile, kuba inkosi iyazi ukuba akufani noPopu Pius ulapha ukwenza abahlobo.
Ukuthetha ngayo: kwenzeka ntoni ngophando olungqalileyo LOKUVULA UPHANDO KWIXESHA LOKUBULALA eliphuhliswe kwiveki ephelileyo? Ngaba ukuzibulala komntwana ngandlel 'ithile kwarhoxisa, njengomthetho wase-Italiyane obeka emngciphekweni kabini andazi ngawo? (Ewe, ndiyayazi indlela esebenza ngayo ingozi.)
UVinnie : Kodwa iibhombu aziphosi de uLenny abuze ukuba uVooello, uyinyani, uyakholelwa ukuba babangele ukuzibulala kuka-Angelo Sanchez. Khange simbulale, utshilo u-Voiello. Umbulele.
Ewe, ewe, jonga ukuba ngubani ekugqibeleni ozifumene iibhola kwindawo engenaPopu.
Drew : Unamandla angakanani uPopu, nangona kunjalo? Ndiyathetha, uninzi lwayo ngamandla ethiyori, ngendlela awayexhobise ngayo inkulumbuso yase-Italiya ngombono wakhe webhlog kaNate Silver. Kodwa ngaphandle kweVatican, ngaba uPapa akayinto efana noTinkerbell? Njengokuba, ukuba awukholelwa kumandla akhe okuthetha noThixo, uLenny uqala ukujonga kakhulu njengoBojack Horseman kweso siqendu apho aya khona eSanta Fe kwaye azame ukuzifaka ebomini kwintombi yakhe yangaphambili. (Icala elisecaleni: UTHANDIWE ujonga phakathi kukaEsther noPeter xa uLenny ebalekela kwelinye igumbi eyokutshintsha ilweyile likaPius. Njengo Oh sweet God, sizifake entweni? Masiqhubeke sijongile Italente kaTaliyane kwaye ungathethi ngayo. Kulungile, kodwa ucinga ukuba baya kuba nomntu ocula isiciko sika-'Haleluya 'kule veki? Sithandwa, yiyo yonke le nto BONISAYO. Ekunene, indlela ebubudenge ngayo kum. Ndilibele. )
UVinnie: Ke, kumzuzu onqabileyo wokuzazi, uLenny uyavuma ukuba uPopu Pius XIII wasilela kwaye wagqiba kwelokuba arhoxe njengoPopu. (Qaphela: Le yinto enqabileyo. Emva koPopu Gregory XII ngo-1415, uPopu olandelayo ukuba ashiye isikhundla sakhe yayingu-Benedict XVI ngo-2013, kwaye oko kungenxa yokuba wayemdala kakhulu ukuba angcwalisele iwayini kwijusi yetumato eyi-V8). Udade uMary ngokuqinisekileyo uzama ukumnqanda-oyena uPapa othandekayo kubo bonke yinto encinci-kodwa unyaniseke kangakanani apho?
Drew Ndiyathetha, uKhadinali Spencer ekuqaleni wayecingelwa ukuba lolukhetho olunobungozi kuba wayenomdla kakhulu. Akukho ndlela yokuba enomdla ngakumbi kunoLenny, nangona kunjalo. KODWA, ukuba sigweba ooPopu kubuchule babo bokwenza imimangaliso kwaye ingezizo izakhono zabo zentlalo… kulungile, ndiyaqikelela ukuba kuxhomekeke nje ekubeni zeziphi iikhrayitheriya zakho kwesi sikhundla. Njengaye, ngaba uLenny usaya kuba ngcwele ukuba angakwazi ukwenza imimangaliso kodwa akasayi kuba yintloko yeCawa yamaKatolika? Kananjalo, ndiyathanda ukuba nesicwangciso sokuphuma esakhelwe ngaphakathi, apho angashiya khona isithuba nangaliphi na ixesha kwaye abaleke noEsther ngokungathi yayinguBatman noCatwoman ekugqibeleni Umkhweli hase omnyama uvukile , kwaye akukho namnye oya kuba nobulumko ngaphezu kwabo bonke.
UVinnie : Ngelishwa, kwangaxeshanye uLenny enzima kwizigqibo zobomi, umzimba womhlobo wakhe osenyongweni ukhutshelwa ngaphandle kweSUV yenkosi yeziyobisi. USorrentino ukhetha ngokuqaqambileyo ukubonisa ubungakanani obukhulu, amandla kunye nomdlalo wezi ziganeko zibini ngokudutyulwa ngumlomo kaPopu Pius XIII onomtsalane, onomtsalane.
Drew : Ukupholisa, akunjalo? Ingakumbi ukusukela, kuthathelwa kwisigqibo sayo esisemva- emva kokuba uPopu efumanise malunga nenkwenkwe yakhe eyinkedama ifumana i-86'd lilungu elirhabaxa elilungu Iphula kakubi umguvela-ndiyakwazi ngokupheleleyo Bona uLenny ebuyisela iCawa kwiingcambu zayo zakudala. Cinga: Inquisition2.0. Ngoku uza kubiza bani ngokuba nguBig Poppa?
Ukwamkelwa kuka-Obama yi-44%, ithi iPoll FDU
'Abagcini beGlass Vol. 3 'Uyakuseta iminyaka engama-20 ezayo yeeMuvi eziMangalisayo
U-Bill Gates 'Philanthropy Role Model unikele ngokusesikweni yonke imali yakhe
UMelinda Gates Ukunyanzelwa koTshintsho lobuNkokheli beSiseko phakathi koQhawulo-mtshato oPhakamileyo
ngubani oku-google namhlanje
Ngaba i-ferrets ayikho mthethweni kwi-york entsha
r / ukuthandana_ingcebiso
upapa omncinci isiqendu 7
Indawo efanelekileyo yokufumana mahala
keto ifomula yokulahleka kobunzima ngokukhawuleza